ကမ္ဘာကြီး သမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့ နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး သမိုင်းကြောင်း ပြောင်းလဲ ဖို့ လိုနေပြီ – Zartiman
ယခု ကမ္ဘာ့ အရေးကြောင့် ပြည်တွင်းရေး မကျရှုံးဖို့လိုသလို အောင်မြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သာကော ဟာ US ကို ဆန့်ကျင်ဖို့၊ ‌မွေးစားသား စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို အပိုင်သိမ်းပိုက်တော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့်၊ အာဏာ လက်မလွှတ်ချင်တဲ့ စစ် အာဏာရှင်တွေဟာလည်း သူတို့လွှတ်မြောက်ဖို့အတွက်၊ အရာရာစတေး အသုံးချတော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့် ..လာမည့်ကမ္ဘာ့အရေးမှာ US အောင်မြင်ဖို့လိုသလို ၊ မြန်မာ့အရေး မှာ လည်း NLD ပါတီ အောင်မြင်ဖို့လိုကြောင်းဟာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသူသားတွေအတွက် အရေးကြီးသော သမိုင်းတဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲ၊ ဖြစ် သောကြောင့်၊ ထိုမှတ်တိုင် ကို စိုက်ထူဖို့_စိုက်ထူသူအထဲ ပါဝင်ဖို့၊ ဝန်းရံအားပေး ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ကျန်တာမလိုပါဘူး။ ဒီအတွက်လည်း DASSK နဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရဟာ နိုင်ငံ အတွက် ကြိုတင် စီမံမှု၊ ကွပ်ကဲမှုတွေနဲ့အတူ သေချာပြင်ဆင် ပြုလုပ်ထားပြ်ီဆိုတာ၊ ယုံကြည် စိတ်ချ ထားပါပြီ။သို့ အတွက် ..ကမ္ဘာကြီး သမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး သမိုင်းကြောင်း ပြောင်း လဲဖို့၊ ကျနော်တို့တွေ ဘာလုပ်ကြ မလဲ… ?!တရုတ် ဟာ သူ့နိုင်ငံက ဘိန်းစစ်ပွဲ နဲ့ ဖျက်စီးခံ ထားရတာတောင်မှ ၊ ရတာ ကို သူ့နိုင် ငံကြ မူးယစ် ကင်းစင်အောင် လုပ်ပြ်ီး၊ မြန်မာကြ ကုန်ကြမ်းပို့၊ မူးယစ်လမ်းကြောင်းဖောက် ၊ နာမည်ခံခိုင်းပြ်ီး၊ သူ့ အကျိုး အ တွက် အမြတ် ထုတ်ဆောင်ပြီး၊ မြန်မာပြည်သူတွေ မူးယစ် သားကောင်ဖြစ် ၊ သေကြေပျက်စီးပြီး တိုင်းပြည် သူ့လက်ထဲအထိ၊ ရယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာက အဲ့အနေထား သ်ီသီကလေး လက်မတင်‌လေးကနေ၊
နိုင်ငံ ကို စစ်အာဏာရှင်တွေ ဖျက်စီးရောင်းစားမှု နဲ့ တရုတ်အောက် မရောက်ဖို့၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီ ပြည်သူ့အစိုးရမှ လက်တစ်လုံးခြား အလိုမှာ ကယ်တင်နိုင် ခဲ့ ပေး ခဲ့တယ်။ ဒါတောင် လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ တရုတ်အစိုးရမှ ကြိုးကိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေး မီးမွှေးခဲ့တာတွေနဲ့၊ ကလားမုန်း တရုတ် လက်ခံကောင်းစားရေးကို ဖန်တီးပြ်ီး၊ ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက် ချုပ်ကိုင် ကြီးစိုး ချယ်လှယ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အဖြစ်ပျက်တွေဟာ၊လက်တွေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအ တွက် ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ သမိုင်းအချက်လက် အစစ်မှန်‌တွေပဲဆိုတာ၊ ဒီက စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပြည်ဖျက်တရုတ် ပြိုလဲကျပြီးရင်၊
တာဝန်ရှိသူတွေက နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်၊ ထုတ်ဖော်ရေးသား အလင်းပြကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ယခု တိုင်းပြည်ကို ဒီလို လူတွေ လက်ထဲကနေ ကယ်တင်ခဲ့တာ_ကယ်တင်နေတာ ဘယ်သူလဲ မေးရင်၊ နောင်မျိုးဆက်တွေ မျက်စိစုံမှိတ် ဖြေနိုင်ရမယ်၊ ဖြေနိုင်ဖို့ ခုက တည်းက သိသင့်တယ်၊သိနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်း အဖြစ်မှန် အစစ်မှန်‌တွေကို၊ နောင်မျိုးဆက်တွေအထိ သမိုင်းရေးထိုး ကျောက်စာတင် ထားရပါလိမ့်မယ်။ သို့ကြောင့် တွေးစကြည့်ရင် တရုတ်နဲ့ ဒ်ီကစစ်အာဏာရှင် အပေါင်းပါတွေဟာ၊ ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအတွက် နိုင်ငံရေး အရရော၊ လူမျိုးရေးအရရော၊ ရှိသမျှအခွင့်ရေးမှန်သမျှ ချိုးဖောက်ပြီး၊ ဖျက်စီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထိ၊ ပြစ်မှုကြီးမား မြောက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်း ရှိသမျှလည်း အကုန်ခွာယူပြီး၊ နိုင်ငံကို ပိုင်းဖြတ် ရောင်းစား သိမ်းပိုက်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားတာပါ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဒါ့အ ပြင် တရုတ်ဟာ သူ့နိုင်ငံအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို၊ သစ်ပင်လေးတစ်ပင်တောင် စွဲမနုတ်ဖို့၊ ပြစ်ဒဏ်ထုတ်လုပ် ကျင့်သုံးနေတဲ့ တ ရုတ်ဟာ ၊ မြန်မာမှာ ရှိသမျှ အမြစ်ပါမကျန် စွဲနုတ်သွားမှုကို၊ တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ထိုင်ကြည့်၊ ပေးလိုက်သူများကတော့၊ အချုပ်အခြာအာဏာ ကို တသွင်သွင်ပြောပြီး၊ စစ်ရေးအမြင်သာရှိရမယ်၊ ငါတို့မရှိရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့၊ အရိုးစည်းရိုးထိုးမယ်ဆိုတဲ့၊ တရုတ်ကို ကြောက်ရပါတယ် ဆိုတဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဟာ အဓိကပါ ဆိုတဲ့၊ အမျိုးသားရေး အတွက်ဆိုတဲ့ ၊ နိုင်ငံကို တစ်လက်မ မှ အထိမခံဘူး ၊ အသားဖဲ့ပေးမယ် ဆိုသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခု လည်း US နဲ့ မြန်မာက ပူးပေါင်းပြီး၊ ထိုင်းနယ်စပ်၊ တရုတ်နယ်စပ်၊ ရခိုင်ဒေသ လမ်းကြောင်းနဲ့၊ ဘကုန်းထွက်ပေါက်၊ X Ray စက်တွေ အထိုင်ချထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ လမ်းကြောင်း ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း စသည်တို့မှာ မူးယစ် လမ်းကြောင်း ကို ပိတ်ဆို့ထားမှု ကြောင့်၊ အခု ‌ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကနေ ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ရှိတဲ့နေရာကနေ ပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်၊ မူးယစ်တွေ သယ်လာလို့ ဖမ်းမိတာကို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆန္ဒနယ် ကျေးရွာအနီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများမိဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ် သတင်းလုပ်ပြန်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဒါ ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ရွေးကောက် မဲဆန္ဒနယ်မြေနဲ့ DASSK နာမည် ကို ဖျက်ချင်တာနဲ့ နှစ်ကျပ်ကွက် နဲ့ ပစ္စည်းလည်းပို့၊ ဖမ်းမိတော့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ် အနီး ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပဲ။
ယုတ်မာပုံများပြော ပါတယ်။ ကလေးကလား အရေးသား နဲ့၊ စစ်အစိုးရခေတ်က ကြေးမုံသတင်းစာ အရေးသားနဲ့ ငါးမင်းဆွေလို ကောင် စားမျိုးတွေ ဖြစ်မှာပေါ့၊ ခက်တာက လူထုက မအတော့ဘူး ထိုးချ အပုတ်ချ ယုတ်မာတာနဲ့ ဂျင်းခေတ်က ကုန်နေပြီဆိုတာ သိနေပြီ၊ ဒါ ကြောင့် အဲဒ်ီ့မူးယစ်ကေ့က ထိုနယ်မြေဒေသနဲ့ DASSK ကို တမင် အပုတ်ချ နာမည်ဖျက်ချင်လို့၊ လုပ်လိုက်တာလားမှ မသိ ။ ဒီတော့ ရှင်းရှ င်းပဲပြောမ ယ်၊ ဒ်ီက ပြည်တွင်းက လူယုတ်မာတွေ ဘာမှ လုပ်မရတော့သလို၊ ပထွေးသာကောကြီးလည်း နားကားနေပြီဆိုတာ သိကြပါဟု မသိဘူးဆိုလည်း ထပ်သိအောင်ပြောလိုက် မယ်။ ဝလည်း တရုတ်ခိုင်းတာလုပ်ပြ်ီး ပြန်ငြိမ်နေရပြီ။ သူက အေးဆေးနေ ချင်သူ။ အေအေလည်း လမ်းကြောင်းပျက်လို့ ငတ်နေပြီး စစ်တောင် မထနိုင်တော့ဘူး ၊
ကျန်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေက အရိုးကိုက်ဖို့၊ သာကောကြီး ချအကြွေး စောင့်နေရတယ်၊ဒါကြောင့် အခု အစိုးရ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တဖွဲ့ခြင်းစီ ဆွေးနွေး မယ် အသံထွက်လာ တယ်၊ အမှန်ကန်လား တရုတ် စနက်လား စောင့်ကြည့်ရ ပါမယ် ဒီတော့ သာကောတောင် တိုင်ပတ် ငတ်နေ လို့ သူများ ပင်လယ်ပြင် နယ်မြေသွားပြီး ငါးတွေ ခိုးဖမ်းနေ ရတယ်၊ နောက် နှစ်လလောက်ဆို သွားပြီ၊ မောင်ရှီကျင့်ပင် ဒူးထောက် ခစား တော့ပဲ၊ မခစားချင်ရင် ထွက်ပေါက်ပြင်ပေါ့၊ ဒါပဲ ရှိ‌တော့တာ ။ ဒီတော့ .. အချုပ်ကိုပဲ ပြောရရင် ထရန့်သမ္မတပြန်ဖြစ် မလားဆို ဖြစ်ပါမယ် .. ဘာကြော င့်ဆိုတော့ အခု သူတည်ထားတဲ့ အကွက် ဟာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ၊ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ရွေးချယ်ရခက်ပြ်ီး၊ ထရန့်ရှိမှ ကမ္ဘာနဲ့သူ့နိုင်ငံ လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ အနေထားကို ပုံဖော် တည် ထားတာ ဖြစ်ပြီး၊
ယခု အရေး ကို ထရန့်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် တခြားလူ ဆို မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အမြင် အခြေနေ ကို ထရန့် မှ တည်ဆောက် ပုံဖော်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သလို၊ အမေရိကန်ဟာ ထရန့်ကိုသာ အားကိုးရာ၊ ထရန့် ဆောင်ရွက်ပေးမှရတော့မှာ၊ မဟုတ်ရင် တရုတ်လက်အောက် ကျတော့မှာဆို တဲ့ အသိအမြင်နဲ့၊ ယခုအရေးကို သူ့ကိုသာ တာဝန်ပေး ပြီးဆုံးအောင်ထိ စွမ်းဆောင်ခိုင်းမှာ ဖြစ်သလို၊ ထရန့်ကို ပြန်မရွေးချယ်ရင် တရုတ် ပြန်ခေါင်းထောင် လာပြီး လူစွာလုပ်တော့မယ်၊သူတို့ကျရှုံးမယ် ဆိုတဲ့ အသိ ကို ရရြှိဖစ်ပေါ်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထရန့်ကို မကြိုက်သူရှိ လည်း၊ နိုင်ငံ Great America ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်၊ သူ့ကိုသာ ပြန်လည် ရွေးချယ်ကြပါလိမ့် မည် ဟု နောက် သူ့ပြိုင် ဘက် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ တ ရုတ်နဲ့ ပြန်အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံပြီး လုပ်ဆောင်မည်ဆိုသောကြောင့် ဒီအချက်ဟာ ထရန့်ကို သမ္မတ ပြန်‌ဖြစ်စေဖို့။
ဗုတ်တင်အရေ အတွက်ကို ဖဲ့ပေးလိုက် သလို ဖြစ်စေပြီး၊ အမေရိကန် အစိုးရမှလည်း အရင်က ထရန့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုများ နဲ့ လုပ်ကွက် အပြောဆိုများ ကို သဘော မကျသော်လည်း ယခုအခါ ထရန့် ရဲ့ တည်ငြိမ်စွာ စွမ်းဆောင်ပြမှု အရည်သွေးကို သဘောကျ နှစ်သက်လာ၍ လက်ခံပြီး အားကိုးယုံကြည်လာသည်ဟု မြင်မိသည်။သို့ကြောင့် ဒီအချက်တွေကပဲ ပြည်သူထက် အစိုးရပိုင်းမှ ထောက်ခံအားပေးပြီး လုပ် ဆောင် ပံ့ပိုး‌ပေးမည့်အတွက် ထရန့်မှ သမ္မတပြန်ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထို့အတွက် သူမှလည်း သူ့တာဝန် တရုတ်ကို ဖြေရှင်း ဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ ပြန်လည် တာဝန်ကျေပွန် ရမည် ဖြစ်လေသည်။သို့ကြောင့် ထရန့်သမ္မတ ဖြစ်မည်လားဆို %ပြည့်ဟု တထစ်ချ ပြောလိုပါ သည်။ထိုအတွက် ယခု ကမ္ဘာ့အရေး တရုတ်အတွက်နှင့် နိုင်ငံရေးအတွက် အရင်က ထရန့်ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် တိုက်ခိုက်သူ။
အစိုးရဝန်များနဲ့ ဒီမိုကရက်ဘက်ကတောင် ဘာသံမှ မကြားရ မလုပ်ဆောင်‌တော့ပေဒါဟာ ဘာကို ပြသတာလဲ ဆိုရင် ကမ္ဘာအတွက် တ ရုတ်နဲ့ အရေးမှာ ထရန့်လုပ်ဆောင် မှု မှန်ကန်ကြောင်း နဲ့ ထရန့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အသိမှတ်ပြု အားပေး ထောက်ခံလာပြီ ဖြစ် ကြောင်းနဲ့၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်အန္တရာယ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်များ၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ဒီမိုကရက်တစ်များနဲ့ ပြည်သူများကပါ မြင်တွေ့လာပြီဖြစ်၍၊ ထရန့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု အရည်သွေးကိုလည်း လက်ခံလာကြပြီ၊ ထရန့်ဘက် ရပ်တည်ထောက်ခံ လာ ကြပြီဟု‌သော ရလဒ်အဖြေ ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ထရန့်မှလည်း တရုတ်ကို အကွက်ကျစွာ လုပ်ဆောင် ကစားထားနိုင်ပြီး၊ တကမ္ဘာလုံးကို သူ့ဘက်ပါလာအောင်နဲ့ ထောက်ခံလာအောင် စွမ်းဆောင် ထားနိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလား ။
ယခု ကမ်ဘာ့ အရေးကွောငျ့ ပွညျတှငျးရေး မကရြှုံးဖို့လိုသလို အောငျမွငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ မဟုတျရငျ သာကော ဟာ US ကို ဆနျ့ကငျြဖို့၊ ‌မှေးစားသား စဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ပေါငျးပွီး၊ မွနျမာပွညျကို အပိုငျသိမျးပိုကျတော့မှာ ဖွဈသောကွောငျ့၊ အာဏာ လကျမလှတျခငျြတဲ့ စဈ အာဏာရှငျတှဟောလညျး သူတို့လှတျမွောကျဖို့အတှကျ၊ အရာရာစတေး အသုံးခတြော့မှာ ဖွဈသောကွောငျ့ ..လာမညျ့ကမ်ဘာ့အရေးမှာ US အောငျမွငျဖို့လိုသလို ၊ မွနျမာ့အရေး မှာ လညျး NLD ပါတီ အောငျမွငျဖို့လိုကွောငျးဟာ၊ ကမ်ဘာ့နိုငျငံသူသားတှအေတှကျ အရေးကွီးသော သမိုငျးတဆဈခြိုး အပွောငျးအလဲ၊ ဖွဈ သောကွောငျ့၊ ထိုမှတျတိုငျ ကို စိုကျထူဖို့_စိုကျထူသူအထဲ ပါဝငျဖို့၊ ဝနျးရံအားပေး ဖို့ပဲလိုပါတယျ။
ကနျြတာမလိုပါဘူး။ ဒီအတှကျလညျး DASSK နဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရဟာ နိုငျငံ အတှကျ ကွိုတငျ စီမံမှု၊ ကှပျကဲမှုတှနေဲ့အတူ သခြောပွငျဆငျ ပွုလုပျထာွးပျီဆိုတာ၊ ယုံကွညျ စိတျခြ ထားပါပွီ။သို့ အတှကျ ..ကမ်ဘာကွီး သမိုငျးကွောငျးကောငျးဖို့နဲ့ မွနျမာပွညျကွီး သမိုငျးကွောငျး ပွောငျး လဲဖို့၊ ကနြျောတို့တှေ ဘာလုပျကွ မလဲ… ?!တရုတျ ဟာ သူ့နိုငျငံက ဘိနျးစဈပှဲ နဲ့ ဖကျြစီးခံ ထားရတာတောငျမှ ၊ ရတာ ကို သူ့နိုငျ ငံကွ မူးယဈ ကငျးစငျအောငျ လုပျွပျီး၊ မွနျမာကွ ကုနျကွမျးပို့၊ မူးယဈလမျးကွောငျးဖောကျ ၊ နာမညျခံခိုငျွးပျီး၊ သူ့ အကြိုး အ တှကျ အမွတျ ထုတျဆောငျပွီး၊ မွနျမာပွညျသူတှေ မူးယဈ သားကောငျဖွဈ ၊ သကွေပေကျြစီးပွီး တိုငျးပွညျ သူ့လကျထဲအထိ၊ ရယူနိုငျအောငျ လုပျဆောငျခဲ့တယျ။ကံကောငျးတာက အဲ့အနထေား သျီသီကလေး လကျမတငျ‌လေးကနေ၊
နိုငျငံ ကို စဈအာဏာရှငျတှေ ဖကျြစီးရောငျးစားမှု နဲ့ တရုတျအောကျ မရောကျဖို့၊ လူထုခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ NLD ပါတီ ပွညျသူ့အစိုးရမှ လကျတဈလုံးခွား အလိုမှာ ကယျတငျနိုငျ ခဲ့ ပေး ခဲ့တယျ။ ဒါတောငျ လူမြိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို စဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ တရုတျအစိုးရမှ ကွိုးကိုငျပွီး မွနျမာပွညျမှာ ဘာသာရေး မီးမှေးခဲ့တာတှနေဲ့၊ ကလားမုနျး တရုတျ လကျခံကောငျးစားရေးကို ဖနျတီွးပျီး၊ ပွညျတှငျးကို ဝငျရောကျ ခြုပျကိုငျ ကွီးစိုး ခယျြလှယျနိုငျဖို့ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ အရာတှေ အဖွဈပကျြတှဟော၊လကျတှေ့ မွနျမာ့နိုငျငံရေးအ တှကျ ဖြောကျဖကျြမရတဲ့ သမိုငျးအခကျြလကျ အစဈမှနျ‌တှပေဲဆိုတာ၊ ဒီက စဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ ပွညျဖကျြတရုတျ ပွိုလဲကပြွီးရငျ၊
တာဝနျရှိသူတှကေ နောငျမြိုးဆကျတှအေတှကျ၊ ထုတျဖျောရေးသား အလငျးပွကွပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ ယခု တိုငျးပွညျကို ဒီလို လူတှေ လကျထဲကနေ ကယျတငျခဲ့တာ_ကယျတငျနတော ဘယျသူလဲ မေးရငျ၊ နောငျမြိုးဆကျတှေ မကျြစိစုံမှိတျ ဖွနေိုငျရမယျ၊ ဖွနေိုငျဖို့ ခုက တညျးက သိသငျ့တယျ၊သိနိုငျဖို့ နိုငျငံရဲ့ သမိုငျး အဖွဈမှနျ အစဈမှနျ‌တှကေို၊ နောငျမြိုးဆကျတှအေထိ သမိုငျးရေးထိုး ကြောကျစာတငျ ထားရပါလိမျ့မယျ။ သို့ကွောငျ့ တှေးစကွညျ့ရငျ တရုတျနဲ့ ဒျီကစဈအာဏာရှငျ အပေါငျးပါတှဟော၊ ကမ်ဘာ့ရာဇဝတျပွဈမှုအတှကျ နိုငျငံရေး အရရော၊ လူမြိုးရေးအရရော၊ ရှိသမြှအခှငျ့ရေးမှနျသမြှ ခြိုးဖောကျပွီး၊ ဖကျြစီး သတျဖွတျခဲ့တဲ့အထိ၊ ပွဈမှုကွီးမား မွောကျပါတယျ။
နိုငျငံတှငျး ရှိသမြှလညျး အကုနျခှာယူပွီး၊ နိုငျငံကို ပိုငျးဖွတျ ရောငျးစား သိမျးပိုကျဖို့အထိ ရညျရှယျထားတာပါ လုပျဆောငျနတောပါ။ ဒါ့အ ပွငျ တရုတျဟာ သူ့နိုငျငံအတှငျး သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို၊ သဈပငျလေးတဈပငျတောငျ စှဲမနုတျဖို့၊ ပွဈဒဏျထုတျလုပျ ကငျြ့သုံးနတေဲ့ တ ရုတျဟာ ၊ မွနျမာမှာ ရှိသမြှ အမွဈပါမကနျြ စှဲနုတျသှားမှုကို၊ တကမ်ဘာလုံး မွငျတှေ့ ခံစားရပါတယျ။ ဒါကို ကကြေနြေပျနပျကွီး ထိုငျကွညျ့၊ ပေးလိုကျသူမြားကတော့၊ အခြုပျအခွာအာဏာ ကို တသှငျသှငျပွောပွီး၊ စဈရေးအမွငျသာရှိရမယျ၊ ငါတို့မရှိရငျ ဘာဖွဈသှားမလဲဆိုတဲ့၊ အရိုးစညျးရိုးထိုးမယျဆိုတဲ့၊ တရုတျကို ကွောကျရပါတယျ ဆိုတဲ့၊ ကာကှယျရေးဟာ အဓိကပါ ဆိုတဲ့၊ အမြိုးသားရေး အတှကျဆိုတဲ့ ၊ နိုငျငံကို တဈလကျမ မှ အထိမခံဘူး ၊ အသားဖဲ့ပေးမယျ ဆိုသူမြားပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ အခု လညျး US နဲ့ မွနျမာက ပူးပေါငျးပွီး၊ ထိုငျးနယျစပျ၊ တရုတျနယျစပျ၊ ရခိုငျဒသေ လမျးကွောငျးနဲ့၊ ဘကုနျးထှကျပေါကျ၊ X Ray စကျတှေ အထိုငျခထြားတဲ့ ပွညျထောငျစုလမျးမ လမျးကွောငျး ၊ ရနျကုနျဆိပျကမျး စသညျတို့မှာ မူးယဈ လမျးကွောငျး ကို ပိတျဆို့ထားမှု ကွောငျ့၊ အခု ‌ဧရာဝတီတိုငျးဘကျကနေ ပငျလယျထှကျပေါကျ ရှိတဲ့နရောကနေ ပစ်စညျးပို့ဖို့အတှကျ၊ မူးယဈတှေ သယျလာလို့ ဖမျးမိတာကို၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ မဲဆန်ဒနယျ ကြေးရှာအနီး၊ မူးယဈဆေးဝါးမြားမိဆိုပွီး ခေါငျးစဉျတပျ သတငျးလုပျပွနျတော့ ရှငျးရှငျးလေးပဲ ဒါ ဟာ လူထုခေါငျးဆောငျရဲ့ ရှေးကောကျ မဲဆန်ဒနယျမွနေဲ့ DASSK နာမညျ ကို ဖကျြခငျြတာနဲ့ နှဈကပျြကှကျ နဲ့ ပစ်စညျးလညျးပို့၊ ဖမျးမိတော့လညျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရဲ့ မဲဆန်ဒနယျ အနီး ဆိုပွီး ရေးလိုကျတာပဲ။
ယုတျမာပုံမြားပွော ပါတယျ။ ကလေးကလား အရေးသား နဲ့၊ စဈအစိုးရခတျေက ကွေးမုံသတငျးစာ အရေးသားနဲ့ ငါးမငျးဆှလေို ကောငျ စားမြိုးတှေ ဖွဈမှာပေါ့၊ ခကျတာက လူထုက မအတော့ဘူး ထိုးခြ အပုတျခြ ယုတျမာတာနဲ့ ဂငျြးခတျေက ကုနျနပွေီဆိုတာ သိနပွေီ၊ ဒါ ကွောငျ့ အဲဒျီ့မူးယဈကကေ့ ထိုနယျမွဒေသေနဲ့ DASSK ကို တမငျ အပုတျခြ နာမညျဖကျြခငျြလို့၊ လုပျလိုကျတာလားမှ မသိ ။ ဒီတော့ ရှငျးရှ ငျးပဲပွောမ ယျ၊ ဒျီက ပွညျတှငျးက လူယုတျမာတှေ ဘာမှ လုပျမရတော့သလို၊ ပထှေးသာကောကွီးလညျး နားကားနပွေီဆိုတာ သိကွပါဟု မသိဘူးဆိုလညျး ထပျသိအောငျပွောလိုကျ မယျ။ ဝလညျး တရုတျခိုငျးတာလုပျွပျီး ပွနျငွိမျနရေပွီ။ သူက အေးဆေးနေ ခငျြသူ။ အအေလေညျး လမျးကွောငျးပကျြလို့ ငတျနပွေီး စဈတောငျ မထနိုငျတော့ဘူး ၊
ကနျြတဲ့ လကျနကျကိုငျတှကေ အရိုးကိုကျဖို့၊ သာကောကွီး ခအြကွှေး စောငျ့နရေတယျ၊ဒါကွောငျ့ အခု အစိုးရ နဲ့ လကျနကျကိုငျတဖှဲ့ခွငျးစီ ဆှေးနှေး မယျ အသံထှကျလာ တယျ၊ အမှနျကနျလား တရုတျ စနကျလား စောငျ့ကွညျ့ရ ပါမယျ ဒီတော့ သာကောတောငျ တိုငျပတျ ငတျနေ လို့ သူမြား ပငျလယျပွငျ နယျမွသှေားပွီး ငါးတှေ ခိုးဖမျးနေ ရတယျ၊ နောကျ နှဈလလောကျဆို သှားပွီ၊ မောငျရှီကငျြ့ပငျ ဒူးထောကျ ခစား တော့ပဲ၊ မခစားခငျြရငျ ထှကျပေါကျပွငျပေါ့၊ ဒါပဲ ရှိ‌တော့တာ ။ ဒီတော့ .. အခြုပျကိုပဲ ပွောရရငျ ထရနျ့သမ်မတပွနျဖွဈ မလားဆို ဖွဈပါမယျ .. ဘာကွော ငျ့ဆိုတော့ အခု သူတညျထားတဲ့ အကှကျ ဟာ ရှမေ့တိုး နောကျမဆုတျသာ၊ အမရေိကနျပွညျသူတှေ ရှေးခယျြရခကျွပျီး၊ ထရနျ့ရှိမှ ကမ်ဘာနဲ့သူ့နိုငျငံ လှတျမွောကျမယျဆိုတဲ့ အနထေားကို ပုံဖျော တညျ ထားတာ ဖွဈပွီး၊
ယခု အရေး ကို ထရနျ့သာ စှမျးဆောငျနိုငျမယျ တခွားလူ ဆို မရနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ အမွငျ အခွနေေ ကို ထရနျ့ မှ တညျဆောကျ ပုံဖျောထားနိုငျပွီ ဖွဈသလို၊ အမရေိကနျဟာ ထရနျ့ကိုသာ အားကိုးရာ၊ ထရနျ့ ဆောငျရှကျပေးမှရတော့မှာ၊ မဟုတျရငျ တရုတျလကျအောကျ ကတြော့မှာဆို တဲ့ အသိအမွငျနဲ့၊ ယခုအရေးကို သူ့ကိုသာ တာဝနျပေး ပွီးဆုံးအောငျထိ စှမျးဆောငျခိုငျးမှာ ဖွဈသလို၊ ထရနျ့ကို ပွနျမရှေးခယျြရငျ တရုတျ ပွနျခေါငျးထောငျ လာပွီး လူစှာလုပျတော့မယျ၊သူတို့ကရြှုံးမယျ ဆိုတဲ့ အသိ ကို ရရွှိဖဈပျေါနပွေီ ဖွဈသောကွောငျ့၊ ထရနျ့ကို မကွိုကျသူရှိ လညျး၊ နိုငျငံ Great America ပွနျဖွဈဖို့အတှကျ၊ သူ့ကိုသာ ပွနျလညျ ရှေးခယျြကွပါလိမျ့ မညျ ဟု နောကျ သူ့ပွိုငျ ဘကျ ဂြိုးဘိုငျဒနျဟာ တ ရုတျနဲ့ ပွနျအဆငျပွအေောငျ ဆကျဆံပွီး လုပျဆောငျမညျဆိုသောကွောငျ့ ဒီအခကျြဟာ ထရနျ့ကို သမ်မတ ပွနျ‌ဖွဈစဖေို့။
ဗုတျတငျအရေ အတှကျကို ဖဲ့ပေးလိုကျ သလို ဖွဈစပွေီး၊ အမရေိကနျ အစိုးရမှလညျး အရငျက ထရနျ့ရဲ့ စှမျးဆောငျမှုမြား နဲ့ လုပျကှကျ အပွောဆိုမြား ကို သဘော မကသြျောလညျး ယခုအခါ ထရနျ့ ရဲ့ တညျငွိမျစှာ စှမျးဆောငျပွမှု အရညျသှေးကို သဘောကြ နှဈသကျလာ၍ လကျခံပွီး အားကိုးယုံကွညျလာသညျဟု မွငျမိသညျ။သို့ကွောငျ့ ဒီအခကျြတှကေပဲ ပွညျသူထကျ အစိုးရပိုငျးမှ ထောကျခံအားပေးပွီး လုပျ ဆောငျ ပံ့ပိုး‌ပေးမညျ့အတှကျ ထရနျ့မှ သမ်မတပွနျဖွဈမညျဟု ယုံကွညျသညျ။ ထို့အတှကျ သူမှလညျး သူ့တာဝနျ တရုတျကို ဖွရှေငျး ဆောငျ ရှကျပေးရနျ၊ ပွနျလညျ တာဝနျကပြှေနျ ရမညျ ဖွဈလသေညျ။သို့ကွောငျ့ ထရနျ့သမ်မတ ဖွဈမညျလားဆို %ပွညျ့ဟု တထဈခြ ပွောလိုပါ သညျ။ထိုအတှကျ ယခု ကမ်ဘာ့အရေး တရုတျအတှကျနှငျ့ နိုငျငံရေးအတှကျ အရငျက ထရနျ့ကို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျ တိုကျခိုကျသူ။
အစိုးရဝနျမြားနဲ့ ဒီမိုကရကျဘကျကတောငျ ဘာသံမှ မကွားရ မလုပျဆောငျ‌တော့ပဒေါဟာ ဘာကို ပွသတာလဲ ဆိုရငျ ကမ်ဘာအတှကျ တ ရုတျနဲ့ အရေးမှာ ထရနျ့လုပျဆောငျ မှု မှနျကနျကွောငျး နဲ့ ထရနျ့ စှမျးဆောငျရညျမြားကို အသိမှတျပွု အားပေး ထောကျခံလာပွီ ဖွဈ ကွောငျးနဲ့၊ အထူးသဖွငျ့ တရုတျအန်တရာယျနဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုမြားကို အမရေိကနျကာကှယျရေးဝနျမြား၊ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဒီမိုကရကျတဈမြားနဲ့ ပွညျသူမြားကပါ မွငျတှလေ့ာပွီဖွဈ၍၊ ထရနျ့ရဲ့စှမျးဆောငျမှု အရညျသှေးကိုလညျး လကျခံလာကွပွီ၊ ထရနျ့ဘကျ ရပျတညျထောကျခံ လာ ကွပွီဟု‌သော ရလဒျအဖွေ ကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။ သို့အတှကျ ထရနျ့မှလညျး တရုတျကို အကှကျကစြှာ လုပျဆောငျ ကစားထားနိုငျပွီး၊ တကမ်ဘာလုံးကို သူ့ဘကျပါလာအောငျနဲ့ ထောကျခံလာအောငျ စှမျးဆောငျ ထားနိုငျပွီ မဟုတျပါလား ။
သုံးသပျမှု အနဖွေငျ့သာ… မငျးကွညျညိုနေ Mon _ Aug3_ 0020.